बरु भात छाड्छु मःमः छाड्न सक्दिनँः बुद्धिसागर (अन्तर्वार्ता) - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
कृष्ण आचार्य चैत २२
कलेज पढ्दा पहिलोपटक २०५८ मा म त्यहाँ गएको थिएँ। खुल्लामञ्चको कार्यक्रम हेर्न गएका थियौँ। निकै भोक लाग्यो। साथीले ‘पिरो मःम: खान जाने हो?’ भनेर सोध्यो। मलाई पिरो भनेपछि पहिल्यैदेखि मन पर्ने, मुख रसाई हाल्यो। तर, पैसा थिएन। साथीलाई ‘मसँग पैसा छैन’ भनेँ। उसले ‘मसँग छ जाऊँ’ भन्यो। हामी गयौँ। उसँग पनि एक प्लेटको मात्र पैसा रहेछ। मिलेर आधा–आधा खायौँ। त्यतिबेला मलाई संसारको सबैभन्दा मीठो मःम: खाएजस्तो लाग्यो। तर, बिडम्बना....आधा प्लेटमात्र खान पाइयो।
०५९–६० सालतिर घट्टेकुलोमा बस्न थालेपछि साँझको भात नै मःम: हुन्थ्यो। साँझपख गयो, डेढ प्लेट मःम: खाएपछि आनन्द। खाजा पनि हुने, भात पनि हुने। अर्को कुरा, भोक लागेको बेला साथीभाइलाई ‘खाना ख्वा न’ भन्न अलि असहज हुने। तर, आज ‘मःम: ख्वा है...’ भन्दा अलि स्ट्यान्डर सुनियो। यसरी मःम: भात नै जस्तो भइदियो।
तपाईंको मःम:सँगको सम्बन्ध चाहिँ...!
हिसाबै गरिएन यार! कति खाइयो होला त भनेपछि...(हिसाब गर्दै, त्यहि हो अहिलेसम्म ५–६ लाखको त खाइयो होला (मःम:को रकम र आफूले खान थालेको समय जोडेर मौखिक हिसाब गरेपछि)।
महाबौद्धमा पियुष औषधालय छ। त्यो सँगै जोडिएको छ त्यो पसल। तर, त्यो देखाउन आफैले लग्नु पर्छ। नत्र देख्न गाह्रो पर्छ। फेरि कसैले देखेर छिर्ने सम्भावना पनि कम छ। किन कि हेर्दा सामान्य ठाउँ छ। तपाईंलाई चाहिँ म लगौँला नि!
प्रकाशित २२ चैत २०७५, शुक्रबार | 2019-04-05 12:23:04